Malunga nathi -iKingtone Glass Products Co, Ltd.
Xuzhou Kingtone Glass Iimveliso Co., Ltd.
I-Xuzhou Kingtone Ukupakisha ngumthengisi ophambili wepremiyamu kunye nokupakishwa kweglasi ekhethekileyo yokutya kunye nesiselo, ishishini lokhathalelo lomntu. Sisekwe ngo-1985 kwaye sinamava angaphezulu kweminyaka engama-20 yokuvelisa. Sinamava amaninzi okuvelisa imveliso kwaye sixhotyiswe ngetekhnoloji eyomeleleyo kunye nezixhobo eziphambili zokuvelisa. Sisoloko senza iimveliso ngokwemigangatho yelizwe kwaye iimveliso zethu zidume eTshayina ngomgangatho ophezulu. Siphumelele ngempumelelo i-ISO9001: 2000 abathengi abaQinisekisiweyo abangama-2000 kwihlabathi lonke.
Thinazasekwa ngo-1985 kwaye babe namava lemveliso engaphezu kwama-20. Sinamava amaninzi okuvelisa imveliso kwaye sixhotyiswe ngetekhnoloji eyomeleleyo kunye nezixhobo eziphambili zokuvelisa.
"Umgangatho ophezulu, amaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo emva kokuthengisa" ngumgaqo wethu, "Ukwaneliseka kwabaThengi" yinjongo yethu yanaphakade; Iimveliso zethu ziye zamkelwa ngokubanzi kwiimarike ezininzi ekhaya nakwihlabathi jikelele.
Sinegama elihle lokubonelela ngobugcisa kunye nomgangatho wenkonzo esemgangathweni. Kwangelo xesha, sigcina ixabiso kwinqanaba elikhuphisanayo nabathengi ukuze babe namathuba amaninzi kunye neenzuzo kwintengiso.
Sineminyaka engaphezu kwama-20 + yamava oshishino
Ngokukodwa, iXuzhou Jintong ibonelela ngeebhotile zeglasi kunye nezinto ezahlukeneyo (iminqwazi yeedropha, iimpompo zokutshiza, iminqwazi yokujikeleza, iswekile, iintonga kunye neminqwazi). Thina phantse iminyaka engama-20 yamava kushishino ukupakishwa kwaye unokubonelela ezikumgangatho ophezulu kunye ezintsha iimveliso nokupakishwa iglasi ngenxa ubuhle zehlabathi kunye nolusu brand.
Onke amaziko ethu okuvelisa aphambili ahlangabezana nemigangatho yase-US kwaye aqinisekisiwe yi-FDA, ukuze sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nakwamanye amazwe. Ukongeza, inkampani ikwashicilela isikrini, ukupeyinta, ukunceda, itekhnoloji yokwenza electroplating, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nabangaphandle.Izinto esinazo zingaphezulu kwe-60,000 iinyawo zesikwere apho sigcina khona iimveliso ezingaphezu kwezigidi ezingama-20 ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi kwangoko kunye nokugcina amaxesha amafutshane okuhambisa.